Curiosities 5 momba ny Samsung izay azo antoka fa tsy fantatrao | Vaovao momba ny gadget
Curiosities 5 momba an'i Samsung izay azo antoka fa tsy fantatrao
Samsung Mety ho iray amin'ireo orinasan-teknolojia fanta-daza eran'izao tontolo izao izy ary iray amin'ireo fanovozan-kevitra amin'ny tsenan'ny telefaona finday, izay iadian-kevitra amin'i Apple ny fanjakan'ny varotra. Tao anatin'izay andro vitsy lasa izay, ny orinasa Koreana Tatsimo dia naka ny pejy voalohany tamin'ny gazety noho ny olana nanjo azy tamin'ny fipoahan'ny Galaxy Note 7 azy, saingy soa ihany fa tsy ny Samsung no mahery fo noho ny olana.
Androany dia hijanona tsy hiresaka momba ilay Galaxy Note 7 mipoaka ihany isika ary ho hitantsika Curiosities mahaliana 5 momba an'i Samsung izay azo antoka fa tsy fantatrao. Ary ny orinasa Koreana Tatsimo dia mendrika ny hamadibadintsika ny pejy, hiverina hiresaka momba ny finday findainy sy ny fitaovana hafa na androany momba ny fahalianana sasany.
Alohan'ny hijerena ireo te hahafanta-javatra izay holazainay aminao anio, dia tokony ho fantatrao fa Samsung dia noforonina tamin'ny 1938 miaraka amin'ny anarana "Samsung Sanghoe", izay orinasa manana tantara lava sy lava. Ny vokatra voalohany novokariny sy namidiny dia paty izay ahafahanao mahatsapa fa ny tantaran'ny Samsung mihitsy dia farafaharatsiny mahaliana sy mahaliana.
1 Samsung, anarana mampiharihary
2 Apple dia miasa noho ireo singa noforonin'i Samsung
3 Tsy manaikitra ny lelany mihitsy ny CEO anao
4 Samsung dia mandany vola amin'ny marketing an-tapitrisany ary mazava ho azy fa mandeha
5 Ny fananganana tsangambato lehibe indrindra manerantany dia nataon'i Samsung
Samsung, anarana mampiharihary
Araka ny efa nolazaintsika dia nanomboka niantso ny tenany ho "Samsung Sanghoe" i Samsung tamin'ny fiandohan'ny tantarany, ary tsy ela taorian'ny nanesorany ny anarany. Ny anarana, araka ny eritreritrareo an-tsaina, dia tsy kisendrasendra, satria tsy anaran'ireo orinasa mahomby indrindra eo amin'ny tsena.
Ny anaran'ny orinasa Koreana Tatsimo dia fitambaran'ny teny roa misy dikany betsaka; Sam (telo) sy Sung (kintana). Any Korea atsimo, firenena niavian'ny Samsung, ireo kintana dia tsy misy ifandraisany amin'ny fahombiazana toy ny any amin'ny ankamaroan'ny firenena eto an-tany, fa kosa manondro ireo andriamanitra andriamanitra sinoa telo izay maneho ny voninahitra, ny vintana ary ny faharetana.
Ankehitriny isaky ny maheno ny anaran'ny Samsung ianao dia ho fantatrao fa mitady ny Koreana Tatsimo manomboka amin'ny anarany, ny voninahiny, ny vintana ary ny faharetany maharitra mandrakizay.
Apple dia miasa noho ireo singa noforonin'i Samsung
Apple sy Samsung dia orinasa roa lehibe eo amin'ny tsenan'ny finday, zavatra mety hitarika antsika hieritreritra fa kely dia kely ny fiaraha-miasa eo amin'izy ireo. Na dia izany aza Ny orinasan-tserasera Cupertino tantanan'i Tim Cook dia ampahan'ny ampahany amin'ireo singa ampiasain'i Samsung ho an'ny fitaovany.
Ny orinasa Koreana Tatsimo dia mamatsy an'i Apple, ohatra, amin'ny kapila mafy SSD ho an'ny Mac na fampisehoana retina ho an'ny iPads. Satria ny orinasa manana paoma manaikitra dia tsy manolotra tahirin-kevitra ofisialy bebe kokoa momba ireo singa azony tamin'ny orinasa hafa, tsy afaka manome antsipiriany bebe kokoa anao izahay, fa raha te hanana hevitra, ny fizarana finday an'ny Samsung dia mihevitra fotsiny ny orinasa miorina any Korea Atsimo 30 % ny vola miditra isan-taona.
Tsy manaikitra ny lelany mihitsy ny CEO anao
Ny orinasam-teknolojia sasany dia tarihin'ireo olo-malaza ary amin'ny tranga sasany na dia ny olona mihoa-pampana aza. Amin'ny tranga Samsung, Lee Kun-hee Nahavita nanamarika vanim-potoana iray izy ary nanangana tamina ezaka lehibe ny orinasa ankehitriny. Azontsika atao koa ny milaza fa nahavita azy izy nefa tsy nanaikitra ny lelany, na oviana na oviana ary amin'ny lafiny rehetra.
Ny iray amin'ireo fehezanteny tadidiny indrindra dia ilay "Ovao ny zavatra rehetra afa-tsy ny vady aman-janakao". Ho fanampin'izay, namela ny vavany hisokatra ihany koa izy io rehefa nampivondrona ny mpiasany marobe tamin'ny 1995 ary nandrehitra fitaovana finday marobe ho mariky ny tsy fisiany ary mila manatsara zavatra betsaka izy ireo mba hisongadinana. ny tsenan'ny telefaona finday. Raha ny zavatra hitantsika dia toa mandeha tsara ny fandoroana finday avo lenta.
Samsung dia mandany vola amin'ny marketing an-tapitrisany ary mazava ho azy fa mandeha
Ny iray amin'ireo lafiny mamela an'i Smausng ho iray amin'ireo mpanapaka lehibe eo amin'ny tsenan'ny telefaona finday, ankoatran'ny maodely ho an'ny fitaovana famokarana manana kalitao lehibe dia ny fampiasam-bola lehibe entiny amin'ny marketing. Io dia ahafahanao mampahafantatra, ohatra, ny fitaovanao finday amin'ny mpampiasa rehetra ary manao azy amin'ny fomba tsara indrindra ihany koa, amin'ny alàlan'ny dokambarotra amin'ny fahitalavitra na amin'ny alàlan'ny sora-baventy dokam-barotra goavambe izay azo inoana fa efa hitanao tamina fotoana maromaro tao amin'ny tanànanao.
Ny teti-bola amin'ny marketing dia amin'ity 2016 ity dia tsy misy zavatra hafa mihoatra ny 3.300 tapitrisa dolara, izay mametraka azy eo amin'ireo orinasa manao fandoavana avo indrindra amin'ity fizarana ity, manosotra soroka amin'ireo lehibe hafa eny an-tsena toa an'i Nike, Apple na Sony.
Ny fananganana tsangambato lehibe indrindra manerantany dia nataon'i Samsung
La tilikambo biriky khalifa Any Dubai no misy azy ary iray amin'ireo manintona lehibe, tsy eto amin'ny firenena ihany, fa manerantany satria izy no rafitra lehibe indrindra naorin'ny olombelona. Ny haavony 828 metatra ary mbola tsy afaka nihanika ny tampony indrindra isika, saingy miaraka amin'ny filaminana tanteraka dia tsy maintsy ho mahafinaritra fotsiny ny fahitana. Ireo data rehetra ireo dia fantatry ny olona maro, fa ny vitsy no mahalala izany Samsung, tamin'ny alàlan'ny iray amin'ireo fizarana azy, dia nandray anjara tamin'ny fananganana ity tilikambo ity.
Ny fizarana Samsung izay nandray anjara tamin'ny fanamboarana dia ny Samsung C&T Corporation, ampahany amin'ny orinasa matihanina amin'ny lamaody, varotra ary fananganana, na dia eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena aza dia ity orinasa ity no mirehareha amin'ity zava-bita manan-danja ity.
Ireto ny sasany amin'ireo te hahafanta-javatra ao amin'ny Samsung, orinasa iray izay mino ny maro fa natokana ho an'ny fanamboarana sy fivarotana fitaovana finday fotsiny, fa tena hita eo amin'ny tsena hafa ary nandray anjara tamin'ny iray amin'ireo tsangambato lehibe manerantany aza.
Fantatrao ve fa te hahafanta-javatra bebe kokoa momba an'i Samsung?. Raha toa ka manamafy ny valiny, dia efa mandany fotoana ny milaza aminay amin'ny toerana natokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy antsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Curiosities 5 momba an'i Samsung izay azo antoka fa tsy fantatrao
Sandstone, ny zavamaniry mpamokatra masoandro lehibe indrindra eto an-tany
DeepMind dia efa mahay mianatra tsy misy idiran'ny olombelona